Akara mmuke: ihe ndi ozo di nma banyere uzo mmepere emepe a | Site na Linux
Akara mmuke: nke kacha mma ndị ọzọ na oghere ihe a
Akara mmuke bụ otu n'ime ndị isi na ekwentị sọftụwia software dabere na sistemụ VoIP na PBX. Mana ọ bụghị naanị sọftụwia dị iji mejuputa ụdị sava a. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ mara uzo ozo Iji mejuputa sistemụ ndị a, lee ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị dị ịrịba ama.
Fọdụ n'ime ndị ọzọ a na-emeghe emeghe ma ọ bụ n'efu, ndị ọzọ abụghị. Mana ha niile bụ nnọọ na-akpali ma enwere ike gbanwee ha na mkpa gị n'ụzọ ka mma ma ọ bụ ka njọ.
1 Ndepụta nke uzo ozo na akara mmuke
1.1 3CX (ihe ngwọta dị mkpa na akara nke Akara Akara)
1.2 Uzo ndi ozo na akara mmuke
1.2.1 Igwe ojii
1.2.2 Igwe ojii Genesys
1.2.4 Ụgbọ elu
1.2.7 Mpempe akwụkwọ Zadarma
1.2.10 PBX mebere
Ndepụta nke uzo ozo na akara mmuke
Lee ị nwere ike ịchọta ndepụta zuru oke na ụfọdụ n'ime ihe kacha mma dị adị maka akara mmuke. Ọ bụrụ na, n'ihi ihe ụfọdụ, akara mmuke adịghị egbo mkpa gị ma ọ bụ na ịchọrọ ịnwale ihe dị iche, ịnwere ike ịnwale ọdịmma gị na otu n'ime ọrụ ndị a ...
3CX (ihe ngwọta dị mkpa na akara nke Akara Akara)
Akara mmuke bụ ebe ikpo okwu na - emeghe ma na - emeghe. Nke a bụ nnukwu ihe mkpali, mana ọ bụghị usoro ekwentị dị njikere, ọ chọrọ a ntinye na nhazi iji malite iji ya. Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ihe dị mfe karị, ị nwere sistemụ Asterisk na mkpịsị aka gị dịka Digium, FreePBX, Switchvox nke chọrọ nzụta nke modulu mmeba ma ọ bụ ndị mgbakwunye iji nwee ọrụ dị elu.
3CX Linux nwere uru niile nke akara mmuke, mana na-enweghị ọghọm nke nyiwe ndị ọzọ akpọrọ na paragraf gara aga. Na ya ị nwere ike ichefu banyere isi ọwụwa iji nwee usoro ọrụ site na oge mbụ.
n'etiti ebe nkiri:
Nchịkọta maka afọ 1 n'efu.
Ohere nke ịwụnye Google Cloud, Amazon AWS ma ọ bụ Microsoft Azure na igwe ojii gị, ọbụlagodi na VPS Linux instances, na VM, Raspberry Pi, ma ọ bụ OpenStack.
Dị mfe na ntinye na nhazi.
Nchịkwa dị mfe na-enweghị ihe ọmụma nchịkwa.
Ọ na-emelite na-akpaghị aka.
Enwekwuola mgbochi hacking.
Ọ nwere ngwa ọdịnala maka iOS na gam akporo, yana ọ na-arụkwa ọrụ na ekwentị IP.
Kwe ka ogwe aka nke SIP gi chekwaa oku di anya.
Mwebata dị mfe na CRM dị iche iche.
Dochọghị modulu mmeba.
3CX Official weebụsaịtị
Uzo ndi ozo na akara mmuke
Ewezuga nke gara aga, ị nwekwara ike ịchọta ihe ngwọta ndị ọzọ na akara mmuke ma ọ bụ nwee ọrụ yiri ya na nke a.
Ọ bụ ihe ngwọta maka ụlọ ọrụ na-achọ imeziwanye ahụmịhe ha na ndị ahịa ha site na ọwa olu ndị ọzọ ahaziri iche. Igwe ojii bụ azịza zuru oke iji mepụta igwe ojii gị PBX. A na-eji ya maka ọtụtụ ndị ọrụ ọrụ, yana maka oke ọrụ na azụmahịa gị.
Na-agbakwunye na enweghị nsogbu na ọtụtụ e-azụmahịa ma ọ bụ CRM ngwọta, nke na-eme ka ọ dịkwuo mma karị.
CloudTalk Official weebụsaịtị
Igwe ojii Genesys
Igwe ojii Genesys ọ bụ ọzọ ọzọ ka aga na ndị. Wayzọ iji nwee ikpo okwu dị ka akara mmuke, mana dabere na igwe ojii na ikike iji nye ndị ọrụ azụmaahịa gị ike ma nye ha nlele 360º nke ihe na-eme ndị ahịa.
Na-enye ohere ngwa na mfe mmejuputa iwu, na-enye gị ohere ịnwe sistemụ na ihe nkeji, na mgbakwunye na ịmegharị na iwu data ugbu a. Ma ọ bụrụ na nke a dị gị ka obere, ọ nwere oke nnweta enyere ndị redundancy, ka ọ ghara ịkwụsị ịrụ ọrụ ọfụma.
Genesys Cloud weebụsaịtị
Ọ bụ igwe ojii na-eji ọtụtụ ọfịs arụ ọrụ. Ezubere ọrụ a maka SMEs na nnukwu ụlọ ọrụ. Ke adianade do, ọ implements a 100% zuru ezu na nwa afọ ekwentị usoro jikwaa oku gị, kọntaktị, wdg
Enwere ike ịbawanye ya, yana ikike site n'aka 1 onye ọrụ gaa na ndị ọrụ 10.000 ma ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ toro. Ọ dịkwa ngbanwe dị ukwuu, na-akwado oku site na ebe ọ bụla mgbe ịbanye na Salesforce, enwere ike iji ya rụọ ọrụ na-enweghị mkpa maka mgbakwunye ma ọ bụ ekwentị. naanị na ekweisi.
Ebe nrụọrụ weebụ Natterbox
Ọ bụ ihe ndozi ugbua na uzo nke akara mmuke. N'etiti atụmatụ ya ndị a ma ama bụ ịdị mfe nke iji ya, ijikọ ọnụ na nyiwe isi na ogo ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-enye ohere ijikọ ya na ịpị dị mfe yana ọtụtụ nyiwe CRM, nke na-eme ka mmejuputa ya na ụlọ ọrụ.
Ọ dịkwa nnọọ zuru ezu, na ọrụ dị elu maka oku gị na ohere ị nyochaa nsonaazụ na oge, iji nyochaa ọrụ.
Websitelọ ọrụ gọọmentị Aircall
Ọ bụ ọrụ maka òtù na-abụghị uru na SMEs. Site na Intulse ị ga - enweta ezigbo ihe nzụpụ VoIP, yana ikwe ka ịhazie ịhe ị chọrọ na ngalaba ị na-arụ.
Gụnyere na-akpọ ndekọ na akparaghị ókè oku akụkọ ihe mere. N'ezie, ọ dabeere na igwe ojii ma na-enyere olu ụlọ ọrụ aka, faksị, ederede, na ngwa mkpanaaka.
Ebe nrụọrụ weebụ intulse
Ọzọ akara mmuke ọzọ bụ JustCall. Usoro ahịa na enyemaka nke ji nwayọ nwayọ na-ewu ewu. Ọ dabere na igwe ojii igwe ojii, ma nye gị ohere ịnakọta nọmba ekwentị site na mba 58 iji pụta dị ka ọnụọgụ mpaghara maka ndị ahịa gị.
JustCall na ebe nrụọrụ weebụ
Mpempe akwụkwọ Zadarma
Nwere ike ịnwale usoro ahụ n'efu maka oge Zadarma. Igwe ojii na-agbanwe agbanwe nke igwe ojii na-enye gị ohere ịnweta azịza emere tupu ahazi usoro ekwentị ekwentị gị dị mfe.
Kwesighi ịzụta akụrụngwa dị oke ọnụ, ma ọ bụ nwee ịtọlite ​​ahịrị ekwentị, ha niile na-arụ ọrụ n'Internetntanet.
Weebụsaịtị gọọmentị Zadarma
Ọ bụ usoro ekwentị ọzọ maka mkpanaka pụtara oge a, kensinammuo, na igwe ojii. Ọ na - enye ụlọ ọrụ ohere ịrụ ọrụ n'ụzọ dị mfe, yana nyochaa ọtụtụ data na ntanetị weebụ ya, si otú a na - achịkwa azụmahịa gị nke ọma. Na mgbakwunye, enwere ike ịmegharị ya maka mkpa dị iche iche, ọ dị mfe, ngwa ngwa ma nwee sistemụ tiketi.
NUACOM webụsaịtị gọọmentị
Echiche maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche ndị na - arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa na kọntaktị n'ime ụlọ ọrụ ahụ. O nwere ndi ahia di nkpa n’ime ugbo ala, ike, ochichi, wdg.
Ebe a bụ igwe ojii, ma nwee azịza API iji jikwaa mkpọsa na kọntaktị ndụ. Ọ gụnyekwara nyocha data, mkpesa, mwekota na CRM, ozi olu na enweghị oku, nnyefe site na olu na SMS, wdg.
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Ytel
N'ikpeazụ, ihe ọzọ na Asterisk na ndepụta a bụ azịza igwe ojii a PBX mebere. Ihe ngwọta e mere maka ahịa dịgasị iche, n'ihi ya, ọ nwere ike ịdaba n'ọtụtụ ụdị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Nwere ike ịrụ ọrụ na sistemụ ekwentị nke ụlọ ọrụ ma tinye ya n'ime nkeji ole na ole. Ọ na-enye VoIP, usoro analog, nkwado ekwentị, WebRTC, SIP Trunking, na nhọrọ ịkpọ oku.
Virtual PBX ukara website
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Akara mmuke: nke kacha mma ndị ọzọ na oghere ihe a
Edemede a na - akpọsaa ụdị nsụgharị ndị na - emeghe. Ezigbo uzo ozo bu azịza dika freeSwith, pbx dị mkpa, wdg, wdg. Ihe ojoo ojoo akwukwo a mere ..
Zaghachi John Doe
E kwupụtara mgbanwe izizi na ndụdụ CUPS